वयस्कहरूको लागि 60 सबै भन्दा राम्रो बोर्ड खेल | मलाई फुर्सद दिनुहोस्
इसहाक | 17/12/2021 17:48 | अद्यावधिक गरियो 20/12/2021 16:09 | सामान्य
विश्वव्यापी महामारी घोषणा भएदेखि, वयस्कहरूको लागि बोर्ड खेल तिनीहरूको बिक्री आकाश छ। कारण यो हो कि, प्रतिबन्ध र कसैको डरको सामना गर्दै, घरमा परिवार वा साथीहरूसँग टेबलको वरिपरि बस्नु र यी खेलहरू खेल्दै हाँसो र प्रतिस्पर्धाका उत्कृष्ट क्षणहरू बिताउनु भन्दा राम्रो र सुरक्षित योजना के हुन सक्छ।
यद्यपि, तिनीहरूमध्ये धेरै छन् कि यो कहिलेकाहीं जटिल छ कसरी छनौट गर्ने थाहा छ। यस गाइडमा तपाईले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ सबै राम्रो बोर्ड खेल सम्बन्धित वयस्कहरूका लागि, प्रकारहरू, र विभिन्न विकल्पहरू जुन तपाईंले घरमा उत्तम समय बिताउनु पर्छ ...
1 सबै भन्दा राम्रो बेच्ने वयस्क बोर्ड खेलहरू
1.3 पार्टी एण्ड कम्पनी एक्स्ट्रिम ३.०
2 वयस्कहरूको लागि उत्तम बोर्ड खेल कसरी छनौट गर्ने?
2.1 वयस्कहरूको लागि रमाईलो बोर्ड खेलहरू
2.1.1 ग्लोप मिमिका
2.1.3 बदमाशहरूको जनजाति
2.1.4 खेल बन्द
2.1.5 साथीहरू बीच बोर्ड खेल
2.1.6 तपाईं पागल मेटाउनुहुन्छ
2.1.7 हसब्रो निषेध
2.1.8 हसब्रो जेंगा
2.2 पारिवारिक प्रकारको लागि Trivial
2.2.1 तुच्छ खोज मूल
2.2.2 मामूली जो लुम हुन्छ
2.2.4 को करोडपति हुन चाहन्छ?
2.2.5 शब्द पास गर्नुहोस्
2.2.7 Geek संस्कृति संग खेल्नुहोस्
2.3 साथीहरूसँग खेल्न
2.3.1 4-in-1 बहु-खेल तालिका
2.3.3 पिंग पोंग टेबल
2.3.4 समय सकियो!
2.3.5 जंगल गति
2.3.6 मसँग जोडी छ
2.3.7 EXIN पार्टी
2.3.8 सुतालाई न हो न हो न कुनै रहस्य
2.4 किशोरका लागि
2.4.1 डन्जियन्स र ड्रेगनहरू
2.4.2 गोलियाथ अनुक्रम
2.4.3 म केरा हुँ
2.4.4 बदमाशको जनजाति पाप गरिरहौं
2.5 दुई को लागि बोर्ड खेल
2.5.24लाइनमा
2.5.3 (अन) परिचितहरू?
2.5.4 शब्दहरु संग प्रेम
2.5.5 डेभिर गोप्य कोड डुओ
2.5.6 हसब्रो सिंक द फ्लीट
2.6 रणनीति बोर्ड खेलहरू
2.6.2 डेभिर कार्कासोन
2.6.3 Hasbro जोखिम
2.6.4 Diset रणनीति
2.6.5 क्लासिक एकाधिकार
2.7 सर्वश्रेष्ठ सहकारी खेलहरू
2.7.2 डेभिर होम्स
2.7.3 डेभिर निषिद्ध द्वीप
2.8 पुराना लागि
2.8.1 १० टुक्रा पहेली
2.8.2 समुद्री डाकू जहाज 3D पहेली
2.8.5 UNO परिवार
2.8.7 चेस बोर्ड, चेकर्स र ब्याकग्यामन
2.8.8 बोर्ड Parcheesi + OCA
2.8.9 कार्डहरूको डेक
2.9 नयाँ पुस्ता
2.9.1 अनलाइन बोर्ड गेम र एपहरू
2.9.2 संवर्धित वास्तविकता खेलहरू
3.1 वयस्कहरूको लागि बोर्ड खेलहरू के हुन्?
3.2 यस प्रकारको मनोरञ्जन किन किन्ने?
3.3 तिनीहरूलाई किन्न कहाँ?
सबै भन्दा राम्रो बेच्ने वयस्क बोर्ड खेलहरू
ठूलो रकम छ, वयस्कहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो बोर्ड खेलदुबै क्लासिकहरू जुन पुस्ता पुस्ता बेचिएका छन्, साथै सबैभन्दा आधुनिक। यद्यपि, तपाईं आफैलाई सूचीबाट निर्देशित हुन दिन सक्नुहुन्छ सर्वश्रेष्ठ बिक्रेताहरू वास्तविकताबाट। तिनीहरू शीर्ष बिक्रेताहरू हुन् र, यदि तिनीहरूले यति धेरै बेच्छन् ... यो किनभने तिनीहरूसँग त्यो विशेष छ:
GUATAFAC - खेल ...
के तपाइँ पार्टी वा परिवार वा साथीहरूसँग भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ? के तपाईलाई ग्यारेन्टी हाँसो चाहिन्छ? त्यसपछि वयस्कहरूको लागि यो बोर्ड खेल तपाईंले खोजिरहनु भएको थियो। १६ वर्षभन्दा माथिका मानिसहरूका लागि डिजाइन गरिएको। तपाईंसँग आफ्नो परिवार र साथीहरूको सबैभन्दा विचित्र विचारहरू अनुमान गर्न 16 सेकेन्ड छ। कालो हास्य र फोहोर चुटकुले प्रश्नहरू र 8 विशेष अक्षरहरू सहित 400 अक्षरहरूमा एकत्रित।
वयस्कहरूको लागि अर्को उत्कृष्ट बोर्ड खेलहरू। यसमा सबै प्रकारका चुनौतिहरू छन्, ती सबै राम्रो हास्यले भरिएका छन् जसले गर्दा हाँसो खुल्छ। पूर्णतया बेतुका र हास्यास्पद प्रश्न संग। आफैलाई उपहार दिन वा आफ्ना प्रियजनहरूलाई दिनको लागि उत्तम। निस्सन्देह, यो 18 वर्ष भन्दा माथिका व्यक्तिहरूको लागि हो ...
पार्टी एण्ड कम्पनी एक्स्ट्रिम ३.०
Diset - पार्टी एण्ड को...
यो सबै भन्दा राम्रो बिक्रेता मध्ये एक छ अचम्मको कुरा होइन। तपाईं टोलीहरूमा खेल्न सक्नुहुन्छ, 12 विभिन्न परीक्षणहरू र4कोटीहरूको साथ। रेखाचित्र परीक्षण, प्रश्न, नक्कल, अभिनय, आदि संग। ती सबै मध्ये एक जसले तपाईलाई जति नै खेले तापनि तपाईलाई कहिल्यै बोर गर्दैन, र यसले सबैलाई खेल्नको लागि राम्रो समय दिनेछ।
पार्टी एण्ड कम्पनी किन्नुहोस्।
CORROTO - खेल को...
600 भन्दा बढी कार्डहरूको साथ एक साहसी कार्ड खेल 234 घण्टा सम्म हाँसोको ग्यारेन्टी छ। वयस्कहरूका लागि एउटा खेल जसमा कामुक, साहसी अवस्था, कालो हास्य र ०% नैतिकता मिसाइएको छ। कुनै पनि कुरा रोक बिना हाँस्न जान्छ। यसका लागि, प्रत्येक खेलाडीसँग0सेतो कार्डहरू छन् (उत्तरहरू), र अनियमित खेलाडीले खाली ठाउँमा नीलो कार्ड पढ्छन्। यसरी, प्रत्येक खेलाडीले वाक्य पूरा गर्नका लागि सबैभन्दा रमाइलो कार्ड छान्छन्।
वयस्कहरूको लागि उत्तम बोर्ड खेल कसरी छनौट गर्ने?
समयमा वयस्कहरूको लागि उत्तम बोर्ड खेल छनौट गर्नुहोस् शंका उत्पन्न हुन सक्छ, र सबैले समान विषयवस्तुहरू र खेल ढाँचाहरू मन पराउँदैनन्। त्यहाँ तिनीहरू विभिन्न समूहहरूका लागि छन्, केही विशिष्टबाट परिवारका सदस्यहरूका लागि, अरूहरू जुन तिनीहरूको सामग्री वा विषयवस्तुका कारण साथीहरूको समूहका लागि बढी उपयुक्त छन्, र प्रश्नमा रहेको खेलको प्रकारको सन्दर्भमा पनि केही विशिष्ट। तसर्थ, तपाईले बिभिन्न धेरै माग गरिएका उपश्रेणीहरू थाहा पाउनु पर्छ:
वयस्कहरूको लागि रमाईलो बोर्ड खेलहरू
त्यहाँ वयस्कहरूका लागि केही बोर्ड गेमहरू छन् जुन विशेष गरी उनीहरूले सिर्जना गरेको हाँसोको लागि बाहिर खडा हुन्छन्, ती प्रफुल्लितहरू जसमा जो कोहीले सफा हाँस्नेछन्। ती जसले तपाईंलाई हास्यास्पद परिस्थितिहरूमा अधीनमा राख्छ, वा तपाईंलाई तपाईंको सबैभन्दा हास्य भावनालाई बाहिर ल्याउँछ। जसले तपाईलाई तपाईका प्रियजनहरूसँग अविस्मरणीय साँझ बिताउँछ जुन सधैं सम्झनामा रहनेछ। सबैभन्दा रमाइलो सबै हो:
Glop Mimika - खेल को ...
जब तपाइँ यसलाई भेट्नुहुन्छ, यो ती मिमिक्री वयस्क बोर्ड खेलहरू मध्ये एक हुनेछ जुन तपाइँको मनपर्नेहरू मध्ये एक हुनेछ। परिवार वा साथीहरूका लागि डिजाइन गरिएको, पूर्ण रूपमा ग्यारेन्टी गरिएको हाँसो र रणनीतिको स्पर्श, विभिन्न स्तरहरू, कोटीहरू, र प्रत्येक प्रकारका कार्डहरू मध्ये एउटा जित्ने उद्देश्यका साथ।
Glop Pinta - खेलहरू ...
यो अघिल्लोको लागि राम्रो विकल्प, वा एक उत्तम पूरक हुन सक्छ, किनकि यो परिवार वा साथीहरूसँग ती समयहरूको लागि पनि डिजाइन गरिएको हो जब तपाईंलाई केही मनोरञ्जन र रमाइलो चाहिन्छ। तर, अघिल्लो एक विपरीत, यो चित्रकारी र अनुमान को बारे मा छ।
सिन्भरगुएन्जासको जनजाति -...
कार्डहरूमा आधारित र साथीहरूसँग हाँस्नका लागि उत्तम स्पेनमा बनेको रमाईलो खेल। गुंडाको स्पर्शको साथ, तपाईंले आरोप लगाउनु पर्छ र तिनीहरूले तपाईंलाई आरोप लगाउनेछन्, आफैलाई बेतुका परीक्षणहरूमा पेश गर्ने र तपाईंले कल्पना नगरेको सामाजिक चुनौतीहरूमा भाग लिनुको अतिरिक्त। एउटा खेल जसमा तपाईलाई थाहा छ तपाई कसरी सुरु गर्नुहुन्छ, तर तपाईलाई थाहा छैन कि तपाई कसरी समाप्त हुन्छ ...
बदमाशहरूको जनजाति किन्नुहोस्
खेल बन्द - बटालियन ...
सबै उमेरका लागि र 120 अद्वितीय द्वन्द्वका साथ एक रमाईलो खेल आमनेसामने बनाउन र आफ्नो मानसिक, शारीरिक क्षमता, साहस, कौशल, वा भाग्य प्रदर्शन गर्न। तिनीहरू द्रुत र धेरै मनोरञ्जनात्मक द्वन्द्वहरू हुन्, र जसमा बाँकी खेलाडीहरूले कसले जित्यो भनेर निर्धारण गर्न न्यायाधीशको रूपमा काम गर्नेछन्।
खेल अफ किन्नुहोस्
साथीहरू बीच बोर्ड खेल
😈 साथीहरु🤣 -खेल...
साथीहरूको जमघट, ब्याचलोरेट वा ब्याचलोरेट पार्टीहरू, इत्यादिका लागि उत्कृष्ट। हाँसो र राम्रो कम्पनहरू प्रतिबद्ध प्रश्नहरूको लागि धन्यवाद जसको लागि तपाईलाई विषय र पेश गरिनेछ। तपाईंले कार्डहरू बीचका चुनौतीहरू र प्रश्नहरूको साथ सबै शर्म गुमाउनुहुनेछ ...
साथीहरू बीच बोर्ड खेल किन्नुहोस्
तपाईं पागल मेटाउनुहुन्छ
पार्टीको लागि राम्रो विकल्प, सम्पूर्ण परिवार र साथीहरूको लागि डिजाइन गरिएको, 8 वर्षको उमेरबाट। एक धेरै रमाइलो खेल जसले सबै प्रकारका परीक्षणहरू संयोजन गर्दछ, जस्तै सुन्ने, रेखाचित्र, नक्कल गर्ने, हास्यास्पद आरोपहरू, र उत्कृष्ट अन्तिम पागलपन। सबै5लोकी प्राप्त गर्ने पहिलोले मूर्ख राजाको मुकुट जित्नेछ ...
हास्ब्रो गेमिङ- ट्याबू...
यसलाई परिचयको आवश्यकता छैन, यो एक क्लासिक हो। सबैको लागि, निषेधित शब्दहरू प्रयोग नगरी सुराग दिने उद्देश्यका साथ। अद्यावधिक सामग्री र 1000 शब्दहरू र खेल्ने5विभिन्न तरिकाहरूसँग। यदि अल्टार केटा र जेभियर डेल्टेललाई मी स्लिप्स कार्यक्रममा क्र्याम्प्स चेयरमा कठिन समय थियो भने, अब तपाईं उनीहरूसँग समानुभूति गर्न सक्नुहुन्छ ...
Hasbro - Jenga रिफ्रेस ...
झोलामा मेगा हाई टावर...
क्लासिकहरू मध्ये अर्को क्लासिक, सरल, खेल्न सजिलो, सबै दर्शकहरूको लागि, र रमाइलो। यो काठको ब्लकहरूले बनेको टावर हो जुन तपाईंले ढल्न नदिने प्रयास गर्दै पालैपालो लिनुपर्नेछ। यो तपाईको टुक्रा हटाउने बारेमा मात्र होइन, तर संरचनालाई सकेसम्म अस्थिर बनाउन प्रयास गर्ने बारे हो ताकि अर्को पालोमा उसलाई छुने विपक्षीले यसलाई अझ जटिल बनाउछ।
Jenga किन्नुहोस् Giant Jenga किन्नुहोस्
पारिवारिक प्रकारको लागि Trivial
यदि तपाइँ मनपराउनुहुन्छ पारिवारिक प्रकारको लागि बोर्ड खेलहरू तुच्छ, प्रश्नहरू र जहाँ बुद्धि र संस्कृति को उपहार देखाउन आधारभूत छन्, त्यसपछि तपाईं यो अन्य चयन मा एक नजर गर्नुपर्छ। यहाँ तपाईंले केही लेखहरू देख्नुहुनेछ जसको उद्देश्य सबैभन्दा धेरै जान्‍नेलाई पुरस्कृत गर्नु हो:
तुच्छ खोज मूल
हसब्रो गेमिङ ट्रिभियल...
निस्सन्देह, ट्रिभिया खेलहरू बीच, ट्रिभियल आफै अनुपस्थित हुन सक्दैन। विभिन्न कोटिहरु संग एक सामान्य संस्कृति ट्रिभिया खेल जसमा तपाईले सबै प्रश्नहरुको ठीकसँग जवाफ दिन प्रयास गर्नुहुनेछ र चीजको सबै भागहरू अरू कसैको अगाडि प्राप्त गर्नुहुनेछ।
Trivial Pursuit किन्नुहोस्
मामूली जो लुम हुन्छ
इलेभेन फोर्स LQSA तुच्छ...
यदि तपाईं La que se avecina को प्रशंसक हुनुहुन्छ भने, तब तपाईं भाग्यमानी हुनुहुन्छ, किनकि त्यहाँ धेरै थिमहरू (ह्यारी पोटर, स्टार वार्स, ड्र्यागन बल, द लर्ड अफ द रिङ्स, द बिग ब्याङ्ग थ्योरी) भएका ट्रिभियल जस्ता बोर्ड गेमहरू छन्। ...), तिनीहरू मध्ये पनि स्पेनिश श्रृंखला LQSA। के तपाईलाई लाग्छ कि तपाईलाई यसका क्यारेक्टरहरू र श्रृंखलाका सबै रहस्यहरू राम्ररी थाहा छ? आफैलाई परीक्षण…
Trivial LQSA किन्नुहोस्
गोलियाथ - थप्पड, खेल ...
8 वर्षको उमेरबाट सम्पूर्ण परिवारको लागि अर्को ट्रिभिया खेल। एउटा बोर्ड, 50 प्रश्नहरू सहित 500 कार्डहरू, र सही जवाफ र अंक स्कोर गर्न आफ्नो बुद्धि। त्यो गतिशीलता हो, तर सावधान रहनुहोस् ... प्रश्नहरू पासोले भरिएका छन्, र कहिलेकाहीँ बुद्धि गति भन्दा राम्रो छ।
को करोडपति हुन चाहन्छ?
12 वर्षको उमेरका मानिसहरूले खेल्न सक्छन्, र2वा बढी खेलाडीहरूसँग। वयस्कहरूको लागि यो बोर्ड खेल लोकप्रिय टेलिभिजन क्विजमा आधारित छ। तपाईंले प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्नेछ, र छनौट जटिल हुँदा तपाईंसँग जोकरहरूको श्रृंखला हुनेछ। बहु विकल्प जवाफहरू तपाईंलाई प्रस्ताव गरिन्छ, र तपाईंले प्रत्येक पटक कठिनाईको स्तर बढाउँदै, सही एउटा छनौट गर्नुपर्नेछ।
किन्नुहोस् को एक करोडपति बन्न चाहन्छ?
शब्द पास गर्नुहोस्
Famogames - पासवर्ड ...
टेलिभिजन क्विजमा आधारित सम्पूर्ण परिवारको लागि बोर्ड खेल। तपाईंले आफ्नो ज्ञानलाई6विभिन्न परीक्षणहरूमा परीक्षण गर्नुपर्नेछ, 10.000 भन्दा बढी प्रश्नहरू र अन्तिम रोस्को समय समाप्त हुनु अघि थप शब्दहरू अनुमान गर्ने प्रयास गर्न।
हसब्रो गेमिङ -...
त्यहाँ बाहिरका रमाईलो खेलहरू मध्ये एक, र सबैभन्दा सरल, तर एउटा जसले तपाइँको कल्पना, रचनात्मकता र शब्दावलीलाई परीक्षणमा राख्छ। Scattergories मा तपाईंले2देखि6खेलाडीहरू खेल्न सक्नुहुन्छ, 13 वर्षको उमेरदेखि, र जसमा तपाईंले एक श्रेणीसँग सम्बन्धित शब्दहरू फेला पार्नु पर्छ र जुन एक विशेष अक्षरबाट सुरु हुन्छ।
Geek संस्कृति संग खेल्नुहोस्
गीक संस्कृति संग खेल्नुहोस् ...
सबै उमेरका लागि र टेक्नोलोजी, इन्टरनेट, भिडियो गेमहरू, विज्ञान कथा र सुपरहीरोहरूको संसारका प्रशंसकहरूका लागि शीर्षक। त्यो हो, geeks को लागी। त्यसोभए तपाईंले यी सबै विषयमा आफ्नो ज्ञान वा आफ्ना साथीहरूको परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ।
परिवारको रूपमा खेल्नु भनेको यो गर्नु जस्तै होइन साथीहरूसँगजहाँ वातावरण अलि फरक छ। तिनीहरू धेरै रमाइलो छन्, सामग्रीको साथ जुन तपाइँलाई तपाइँ सामान्यतया कसरी साथीहरूसँग मात्र देखाउनुहुन्छ, वा सम्पूर्ण परिवारको लागि उपयुक्त छैन भनेर देखाउन समावेश हुन सक्छ। ती पलहरूका लागि तपाईंका मिल्ने साथीहरूसँग, तपाईंले फेला पार्न सक्ने उत्कृष्ट शीर्षकहरू हुन्:
4-in-1 बहु-खेल तालिका
Leomark Multigame तालिका ...
यो बहु-खेल तालिका साथीहरूसँग खेल्नको लागि उत्कृष्ट छ। यसमा बिलियर्ड्स, फुसबल, पिङ पङ् र हक्की जस्ता एउटै टेबलमा ४ वटा खेलहरू छन्। गुणस्तरीय सामग्रीहरू जस्तै काठ, बलियो संरचना, १२० × ६१ सेमी बोर्डको आयाम र ८२ सेमी उचाइ। यो छिटो र सजिलै संग भेला हुन्छ र युरोपेली गुणस्तर र सुरक्षा प्रमाणपत्र छ।
म्याक्सस्टोर टेबल फुटबल...
15 मिमी को मोटाई संग MDF काठ मा एक गुणस्तर टेबल फुटबल। आयामहरू 121x101x79 सेमी छन्। स्थिर र उचाइ-समायोज्य खुट्टा संग। गोल काउन्टर, स्टिल बारहरू र गैर-स्लिप रबर ह्यान्डलहरू, चित्रित फिगरहरू, र2कप होल्डरहरू जस्ता विवरणहरू समावेश गर्दछ। दुई बल र माउन्ट निर्देशनहरू समावेश छन्।
पिंग पोंग टेबल
Dione S500o - तालिका ...
फोल्ड गर्न मिल्ने पिंग पङ् टेबल ठाउँ लिन नपाउने, घर भित्र र बाहिरका लागि उपयुक्त, किनकि यसले तत्वहरूलाई प्रतिरोध गर्छ। 274 × 152.5 × 76 सेन्टिमिटरको सतह भएको बलियो बोर्डको साथ। यसलाई सजिलै घुमाउन वा सार्न सक्षम हुनको लागि 8 पाङ्ग्राहरू, साथै खेलको समयमा यसलाई चल्नबाट रोक्नको लागि ब्रेक समावेश गर्दछ। खेल बल र प्याडलहरू समावेश छैनन्, तर तपाईं तिनीहरूलाई अलग किन्न सक्नुहुन्छ:
पिंग पोंग टेबल किन्नुहोस्
फावडे र बलहरूको सेट किन्नुहोस्
रिपो उत्पादन - समय ...
साथीहरूको लागि उत्तम खेल जसमा तपाईंले चरित्र अनुमान गर्नुपर्नेछ। तिनीहरू वास्तविक वा काल्पनिक प्रसिद्ध व्यक्तिहरू हुन सक्छन्, र तिनीहरूलाई नाम नदिई प्रत्येक क्यारेक्टरको वर्णनको लागि सबै धन्यवाद। त्यो पहिलो राउन्डमा, अर्को राउन्डमा स्तर बढ्छ र उनीहरूले एक शब्द मात्र हिर्काउनुपर्छ। तेस्रो राउन्डमा, केवल नक्कल मान्य छ।
समय सकियो किन्नुहोस्!
Zygomatic - जंगल गति ...
विभिन्न minigames संग एक कार्ड खेल।7वर्ष देखि उपयुक्त। तपाईंले आफ्नो जस्तै प्रतीकको साथ कार्डहरू फेला पार्नु पर्छ र टोटेम समात्नु पर्छ। 50 भन्दा बढी प्रतीक र 55 विभिन्न कार्ड संग। गति, अवलोकन र रिफ्लेक्स कुञ्जी हुनेछ।
जंगल गति किन्नुहोस्
मसँग जोडी छ
टेन्गो डुओ - नयाँ ...
एउटा रमाइलो बोर्ड गेम जहाँ तपाईं कार्डहरू खेल्नुहुन्छ र तपाईंले सहयोग गर्नुपर्छ। प्रत्याशा, तपाईका साथीहरूसँग समानुभूति, र गतिले तपाईलाई विजयमा लैजान्छ। प्रत्येक खेलाडीले अन्य खेलाडीहरूले दिएका जवाफहरू अनुमान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ जबकि अरूले उनीहरूको अनुमान लगाउने प्रयास गर्छन्।
मसँग Duo छ किन्नुहोस्
EXIN Fiesta - खेल को ...
यो3मा 1 भएको बक्स हो। तपाईंले हत्यारा खेल फेला पार्नुहुनेछ, जसमा निर्दोष खेलाडीहरूले गुप्त हत्यारा को हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्छ, अर्को टोली खेल, जहाँ तपाईंले प्रत्येक राउन्डका नियमहरू पछ्याउँदै सकेसम्म धेरै शब्दहरू अनुमान लगाउनु पर्छ (विवरण , नक्कल, रेखाचित्र, ध्वनि), र गति खेल, जसले तपाइँको टोलीसँग 1 मिनेटमा सकेसम्म धेरै कार्डहरूको जवाफ दिने प्रयास गर्दछ।
EXIN Fiesta किन्नुहोस्
सुतालाई न हो न हो न कुनै रहस्य
अल लोरो खेलहरू - नि सी नि ...
साथीहरु संग पार्टीहरु को लागी वयस्कहरु को लागी एक टेबल खेल आदर्श। यसमा 10 तयार र मसालेदार प्रश्नहरूको जवाफ समावेश छ हो वा नभनन।2मानिसहरू वा तपाईं खेल्न सक्नुहुन्छ जति धेरै। तपाईंले भर्खरै भेट्नुभएका वा पेय पदार्थको लागि बाहिर निस्किएका अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि सामाजिकता गर्ने तरिका।
न हो न हो किन्न
त्यहाँ पनि केही छन् किशोरका लागि बोर्ड खेलहरू, नयाँ पुस्ताका लागि ताजा र थप आधुनिक हावा उन्मुख। यो उमेर समूहका लागि विशेष विषयवस्तुहरू वा नयाँ प्रविधिहरू, प्रचलनहरू, इत्यादिको ज्ञानलाई सङ्केत गर्ने युवा स्ल्याङ् भएका उत्पादनहरू। यी मध्ये केही उदाहरणहरू छन्:
डन्जियन्स र ड्रेगनहरू
कालकोठरी र ड्रेगन बक्स ...
कालकोठरी आवश्यक किट ...
यो सबैभन्दा लोकप्रिय खेल मध्ये एक हो। ड्रेगनहरू र कालकोठरीहरू विशेष गरी बिग ब्याङ् थ्योरी शृङ्खला पछि लोकप्रिय भएका छन्, किनभने यसका क्यारेक्टरहरू खेल्थे। यदि तपाईंलाई कल्पना र काल्पनिक मनपर्छ भने उत्कृष्ट बोर्ड खेलहरू मध्ये एक। एउटा कथा सुनाउने खेल जसमा खेलाडीहरूले सबै प्रकारका महाकाव्य साहसिक कार्यहरूमा आफूलाई डुबाउनु पर्छ, मेजहरू अन्वेषण गर्ने, खजानाहरू लुट्ने, पौराणिक राक्षसहरूसँग लड्ने, इत्यादि।
D&D स्टार्टर बक्स किन्नुहोस्
D&D आवश्यक किट किन्नुहोस्
Goliath खेल बोर्ड, ...
एउटा खेल जसले केही अन्य खेलहरूलाई एकमा मिलाउँछ। यो एक रणनीति प्रकार हो, र तपाईंले आफ्नो विपक्षीहरूलाई रोक्न र बोर्डबाट तिनीहरूका टुक्राहरू हटाउन सिक्नुपर्छ तिनीहरूले तपाईंसँग यो गर्नु अघि। तपाईं व्यक्तिगत रूपमा वा गठबन्धनको साथ खेल्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले देख्नुहुनेछ कि यो एक लाइनमा तीन जस्तो देखिन्छ, यद्यपि यसमा तपाईंले तेर्सो, ठाडो वा विकर्ण रूपमा एउटै रंगको5चिपहरू राख्नु पर्छ, तर तपाईंको हातमा छोएको कार्डहरूमा निर्भर गर्दछ, मानौं यो पोकर हो।
म केरा हुँ
किनारा मनोरञ्जन -...
एक मनोरञ्जनात्मक, गतिशील र युवा शीर्षक जसमा तपाइँ कुनै चीज वा जनावरलाई विश्वास गर्ने मनोचिकित्सा केन्द्रमा बिरामी हुनुहुनेछ, 90-सेकेन्डका खेलहरू जहाँ खेलाडीहरू बोल्न सक्दैनन्, तर इशाराहरूद्वारा उनीहरूले अरूलाई यो के हो भनेर बुझाउनु पर्छ। तिनीहरूले2वा बढी खेल्न सक्छन्, र यो 8 वर्ष भन्दा बढीको लागि उपयुक्त छ। तर होसियार हुनुहोस्, किनकि "डाक्टर" ले डाक्टरलाई तपाई के हो भनेर देख्न नदिनुहोस्, किनकि त्यो समूहको एक मात्र हो जो "छोटा" जस्तो छैन।
किन्नुहोस् म केरा हुँ
बदमाशको जनजाति पाप गरिरहौं
स्पेनिश बोर्ड खेलहरूको यो श्रृंखलामा अर्को शीर्षक। ती खेलहरू मध्ये एउटा जुन गुण्डाहरू र ग्यारेन्टी हाँसोहरू छन्। आफ्ना सहकर्मीहरू जम्मा गर्नुहोस्, कार्डहरू फेरबदल गर्नुहोस्, र पहिलोबाट सुरु गर्नुहोस्। त्यहाँ4प्रकारका नयाँ कार्डहरू छन्, आरोप, सामाजिक चुनौती, WTF! तपाईंले चाहेको कुरा ल्याउनका लागि प्रश्नहरू र खाली कार्डहरू।
किन्नुहोस् पाप गरिरहौं
दुई को लागि बोर्ड खेल
को दुई को लागि बोर्ड खेल तिनीहरू एक क्लासिक हुन्, र तिनीहरूमध्ये धेरै छन्। वास्तविक जोडी वा कुनै अन्य प्रकारको जोडीको रूपमा खेल्न। जब धेरै मानिसहरू भेला हुन सक्दैनन् र सामान्यतया ठूला समूह वा टोलीहरू चाहिने अन्य बोर्डहरू प्रयोग गर्न सम्भव छैन भनेका लागि उपयुक्त। यस प्रकारका वयस्कहरूको लागि उत्तम बोर्ड खेलहरू हुन्:
धेरै ठाउँ नभएको घरमा पूल टेबल हुनु सधैं सम्भव छैन, तर यो खाने टेबलको साथ बिलियर्डमा परिणत हुन्छ। 206.5 x 116.5 x 80 सेमी लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ मापन गर्ने यस परिवर्तनीय तालिकामा कार्यक्षमता र रमाइलो सँगै आउँछन्। यसमा खेल्नका लागि सबै सामानहरू समावेश छन् र विभिन्न रंगहरूमा टेपेस्ट्रीसँग छनौट गर्न सकिन्छ।
पूल टेबल किन्नुहोस्
फालोमिर - प्लेस ४ खेल...
दुई रङका चिप्स, दुई सहभागीहरू। तपाईंको एउटै रंगको लाइनमा4को पङ्क्तिहरू सिर्जना गर्न प्रयास गर्न प्यानलमा तिनीहरूलाई प्रविष्ट गर्ने विचार हो। प्रतिद्वन्द्वीले पनि त्यसै गर्नु पर्छ, तपाईलाई अवरुद्ध गर्दा ताकि तपाईले यसलाई पहिले प्राप्त गर्नुहुन्न।
4 अनलाइन किन्नुहोस्
(अन) परिचितहरू? -...
यो केवल2वयस्कों को लागी एक बोर्ड खेल हो, तर यो जोडीहरु को लागी विशेष छ। यसमा तपाईले आफ्नो पार्टनरको बारेमा के थाहा छ, दैनिक जीवन, व्यक्तित्व, आत्मीयता, व्यक्तिगत स्वाद, आदि बारे प्रश्नहरूको साथ परीक्षण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। प्रश्न सहितको एउटा पत्र चयन गर्नुहोस्, तपाईलाई उपयुक्त हुने उत्तरको लागि मतदान गर्नुहोस्, र अर्को व्यक्तिसँग मेल खान्छ कि भनेर जवाफ दिनुहोस् ...
(अन) परिचितहरू किन्नुहोस्?
शब्दहरु संग प्रेम
शब्द संग प्रेम -...
जोडीहरूको लागि डिजाइन गरिएको अर्को बोर्ड खेल। यसको साथ तपाईं सम्बन्ध बलियो बनाउन र सबैभन्दा घनिष्ठ रहस्यहरूमा पनि, जोडीलाई अझ राम्रोसँग चिन्न मद्दत गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। यो खेल्न सजिलो छ, त्यहाँ प्रश्नहरू सहित 100 कार्डहरू छन् जुन अतीत, भविष्य, भावनाहरू, पैसा, इच्छाहरू, आत्मीयताहरू, इत्यादिको बारेमा कुराकानीमा नेतृत्व गर्न डिजाइन गरिएको हो।
शब्दमा प्रेम किन्नुहोस्
डेभिर गोप्य कोड डुओ
Devir - गोप्य कोड ...
यो एक जटिलता को खेल हो, सिक्न र रमाइलो गर्न। यसले तपाईंलाई सूक्ष्म र रहस्यमय सुरागहरू पत्ता लगाउन र लुकेका कुराहरू पत्ता लगाउन गोप्य जासूसको जुत्तामा प्रवेश गर्न र यसरी तपाईंको विपक्षीले गर्नु अघि खेल जित्नको लागि सबैभन्दा छिटो र स्मार्ट हुन खेल्न अनुमति दिन्छ।
Duo गोप्य कोड किन्नुहोस्
हसब्रो सिंक द फ्लीट
हसब्रो गेमिङ- सिंक द...
एउटा नौसेना खेल जसमा तपाईंले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीका जहाजहरू डुबाउने प्रयास गर्न कोर्डिनेटहरूसँग खेल्नुहुन्छ। तिनीहरू उसले रोजेको स्थानहरूमा अवस्थित हुनेछन्, र तपाईंले तिनीहरूलाई देख्न सक्नुहुन्न र उहाँले तपाईंको देख्न सक्नुहुन्न। यो अन्धा खेलेको छ, र तिनीहरूलाई हटाउन को लागी तिनीहरू कहाँ छन् पत्ता लगाउन प्रयास गर्दै। निस्सन्देह दुई को लागी क्लासिक को अर्को ...
सिंक द फ्लीट किन्नुहोस्
ARTAGIA खेल रमाईलो र ...
जोडीहरूका लागि एउटा रमाइलो विशेष खेल जसमा तपाईं आत्मविश्वास सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, हास्यास्पद कुराकानीहरू, इश्कबाजी, इत्यादिको साथ हिम्मत गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कार्ड छान्नुहोस्, प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् वा प्रस्तावित रोमान्टिक चुनौती बनाउनुहोस्। हिम्मत गर्नुहुन्छ ?
रणनीति बोर्ड खेलहरू
वारक्राफ्ट, एज अफ एम्पायर, इम्पेरिअम, इत्यादि छोड्न र ट्याब्लेटप खेलहरूमा स्विच गर्न चाहने रणनीति प्रशंसकहरू शीर्षकहरूबाट खुसी हुनेछन् जस्तै:
Devir - Catan, खेल ...
यो एक पुरस्कार विजेता रणनीति खेल हो, र पहिले नै2मिलियन भन्दा बढी खेलाडीहरु संग। यसले ध्यान लिन्छ र जित्नको लागि राम्रो रणनीतिकार हुनु पर्छ। 10 वर्ष र माथिका र3वा4खेलाडीहरूको लागि सिफारिस गरिएको। यसमा तपाईं क्याटन टापुमा पहिलो बसोबास गर्नेहरू मध्ये एक हुनुहुनेछ, र पहिलो शहरहरू र पूर्वाधारहरू देखा पर्न थाल्नेछ। बिस्तारै विस्तार हुँदै जान्छ, सहरहरू सहरमा परिणत हुन्छन्, यातायात र व्यापारका साधनहरू सुधार हुन्छन्, स्रोतको दोहन गर्ने तरिकाहरू आदि।
एक उत्तम रणनीति खेल र सबैभन्दा उन्नत मध्ये एक। यसले थप सम्भावनाहरू र सामग्री थप्न सम्भावित विस्तारहरू सहितको बोर्ड समावेश गर्दछ। यो2देखि5खेलाडीहरूको लागि उपयुक्त छ, र7वर्ष र माथिका लागि उपयुक्त छ। यस खेलमा १० मिलियन भन्दा बढी खेलाडीहरू जोडिएका छन् जसमा तपाईंले आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्न, लड्न र नयाँ सम्पत्तिहरू जित्नुपर्नेछ।
हसब्रो गेमिङ - जोखिम ...
रणनीतिको अर्को महानता जसमा तपाईको साम्राज्यको विजय हुन्छ। 300 आंकडाहरू, मिशन कार्डहरू, 12 गोप्य मिशनहरू, र तपाइँको सेनाको स्थिति र अविश्वसनीय लडाईहरूमा लड्न बोर्ड। गठबन्धन, अचम्मको आक्रमण र विश्वासघातले भरिएको खेल।
Diset- रणनीति मौलिक ...
उमेर 8 र माथि र2खेलाडीहरूका लागि, Stratego वयस्कहरूका लागि उत्कृष्ट रणनीति बोर्ड गेमहरू मध्ये एक हो। एक क्लासिक बोर्ड जहाँ तपाईं आक्रमण गर्न सक्नुहुन्छ र शत्रुको झण्डालाई जित्ने प्रयास गर्न आफैलाई बचाउन सक्नुहुन्छ, त्यो एक प्रकारको CTF। विभिन्न रैंकहरूको सेनाको लागि 40 टुक्राहरू जुन तपाईंको तार्किक र रणनीतिक सोच परीक्षण गर्न सक्षम हुनेछ।
एकाधिकार - क्लासिक, पुरानो ...
त्यहाँ एकाधिकारको धेरै संस्करणहरू छन्, तर सबैभन्दा सफल मध्ये एक अझै पनि क्लासिक हो। यद्यपि यो प्रयोग गर्नको लागि रणनीति खेल होइन, यसलाई केहि बुद्धि चाहिन्छ र कसरी प्रबन्ध गर्ने भनेर जान्दछ कि कसरी सम्पत्तिको साम्राज्य प्राप्त गर्न किन्न र बेच्ने।
सर्वश्रेष्ठ सहकारी खेलहरू
यसको लागि सहकारी बोर्ड खेलगठबन्धनहरूसँग खेल्नको लागि, तपाईंले किन्न सक्ने उत्तम शीर्षकहरू पहिले नै छन्:
8 वर्ष पुरानो देखि सबै उमेरका लागि एक बोर्ड खेल। यो एक सहयोगी खेल हो जहाँ तपाइँ एक रहस्य को समाधान गर्न कोशिस गर्न को लागी छ, र सबै खेलाडीहरु सँगै जित्न वा हार्नेछ। लक्ष्य प्रेतवाधित हवेलीको आत्माको मृत्युको पछाडि के छ भनेर पत्ता लगाउनु र उसको आत्मालाई शान्तिमा आराम दिनु हो। एक खेलाडीले भूतको भूमिका ग्रहण गर्दछ, र बाँकी खेलाडीहरूले माध्यमहरूसँग खेल्छन् जसले गोप्य कुरालाई संकेत गर्ने सुरागहरूको श्रृंखला प्राप्त गर्नेछन् ...
यो खेलले तपाईंलाई 24 फरवरी, 1895, लन्डनमा लैजान्छ। संसदमा बम विष्फोट भएको छ र शर्लक होम्स, उनका सहयोगी सँगै यस केसको सत्यता जान्न संलग्न हुनेछन्।
डेभिर निषिद्ध द्वीप
डेभिर - निषेधित द्वीप ...
एक पुरस्कार विजेता परिवार सहकारी खेल। यसमा तपाईं आफैंलाई साहसीहरूको छालामा डुबाउनुहुन्छ जसले रहस्यमय टापुको खजानाहरू पुन: प्राप्त गर्नुपर्दछ। यो 10 वर्षको उमेर देखि खेल्न सकिन्छ। खतराहरूबाट बच्न र धन प्राप्त गर्न प्रयास गर्न बोर्डको लागि कार्डहरू र आंकडाहरू मिलाउनुहोस्।
निषिद्ध टापु किन्नुहोस्
जेड म्यान खेल स्पेन...
यो सहकारी खेल2देखि4खेलाडीहरू, 14 वर्ष वा माथिका लागि उपयुक्त छ, र जसमा तपाईंले मानवतालाई महामारीबाट बचाउने प्रयास गर्नुपर्छ। फैलिएका रोग र कीटहरूले धेरैको ज्यान लिइरहेका छन्, र तपाईंले उपचार खोज्नुपर्छ। यो गर्नका लागि, तिनीहरू उपचारको संश्लेषण गर्न आवश्यक स्रोतहरू खोज्दै विश्वभर यात्रा गर्नेछन् ...
साथै वरिष्ठहरु तिनीहरूले धेरै "वरिष्ठ" उमेरका लागि धेरै बोर्ड गेमहरू खेल्न राम्रो समय पाउन सक्छन्। केही पहिले नै क्लासिक छन्, र यो उमेर समूहमा रुचि जगाउन जारी छ, अरू केही हदसम्म नयाँ छन्, कम्तिमा हाम्रो देशमा, किनभने तिनीहरू ग्रहका अन्य ठाउँहरूबाट आयात गरिएका छन्। हराइरहेको हुन सक्दैन भनेर विचार गर्न शीर्षकहरू हुन्:
Educa - को प्रतीकहरू ...
2000 टुक्राहरु संग, र युरोप को प्रतीक को एक सुन्दर तस्वीर संग वयस्कों को लागी एक पहेली। पजल, एक पटक भेला भएपछि, 96 × 68 सेमी को आयाम छ। यसको चिपहरू उच्च गुणस्तरका छन् र वातावरणमैत्री सामग्रीबाट बनेको हुनुको साथै इष्टतम रूपमा फिट हुन्छन्। 12 वर्ष पुरानो, वयस्क र पुराना बच्चाहरु संग खेल्न को लागी उपयुक्त।
वयस्कहरूको लागि पजल किन्नुहोस्
समुद्री डाकू जहाज 3D पहेली
CubicFun पहेली 3D एलईडी ...
एक सुन्दर समुद्री डाकू जहाज सिर्जना गर्न एक शानदार 3D पहेली। प्रतिरोधी EPS फोमले बनेको, 340 टुक्राहरू सहित, 68x25x64 cm को आयामहरूसँग, स्केलमा Queen Anne's Revenge को प्रतिकृति निर्माण गर्न। एकपटक एसेम्बल गरिसकेपछि, यसमा 15 वटा लाइटहरू सहितको LED लाइटिङ सिस्टम छ जुन2AA ब्याट्रीहरूद्वारा संचालित हुन्छ। 14 वर्ष र माथिका लागि उपयुक्त।
3D पजल किन्नुहोस्
Falomir- XXL बिंगो खेल ...
क्लासिक्स र सम्पूर्ण परिवारको लागि एक क्लासिक, यद्यपि विशेष गरी पुरानाहरूलाई दिमागमा राखेर। यसमा एक स्वचालित बास ड्रम, नम्बरहरू सहितको बलहरू र खेल्नका लागि कार्डहरूको किट समावेश छ। जसले पहिले लाइन र बिंगो पाउँछ, जित्छ।
Cordays - को मामला ...
संख्याहरूको संयोजन भएका कार्डहरू जुन तपाईंले मिश्रण गर्नुपर्छ, सहभागीहरू बीचमा वितरण गर्नुपर्छ, र क्रमशः सङ्ख्याहरू मिल्नुपर्छ। जसले पहिले आफ्ना सबै चिपहरू राख्छ उसले जित्नेछ।
म्याटेल गेम्स UNO मूल...
एक परिचित र धेरै परम्परागत कार्ड खेल जसले २ खेलाडीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा वा टोलीमा खेल्न अनुमति दिन्छ। लक्ष्य कार्ड बाहिर रन पहिलो हुन छ। र जब तपाईंसँग एउटा मात्र कार्ड बाँकी छ, UNO लाई चिच्याउन नबिर्सनुहोस्!
Lewpox Tic Tac - खेल को ...
सामान्य tic-tac-toe खेल, एक रेखामा3बराबर आकारहरू, या त तेर्सो, ठाडो वा विकर्ण रूपमा राख्ने प्रयास गर्न। र आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई रोक्न प्रयास गर्नुहोस् ताकि उसले यसलाई अघि नपरोस्।
एक पङ्क्तिमा3किन्नुहोस्
चेस बोर्ड, चेकर्स र ब्याकग्यामन
यी तीनवटा क्लासिक खेलहरू खेल्नको लागि 3-in-1 बोर्ड जसलाई कुनै परिचयको आवश्यकता छैन। यद्यपि यो वृद्धहरूको लागि आदर्श हुन सक्छ, तिनीहरू खेलहरू हुन् जसको कुनै उमेर छैन, त्यसैले बच्चाहरूले पनि खेल्न सक्छन्।
बोर्ड Parcheesi + OCA
फोर्नियर पार्चिस र हंस ...
OCA र Parcheesi को खेल सबै समयको सबैभन्दा लोकप्रिय खेलहरू मध्ये अन्य हो। यस उल्टाउन मिल्ने बोर्डको साथ तपाईले पारिवारिक रमाइलोको लागि दुबै खेलहरू पाउन सक्नुहुन्छ।
Fournier F20991 - डेक ...
फोर्नियर- नम्बर ५०५ डेक...
निस्सन्देह, क्लासिक्स बीचमा तपाईंले कार्ड टेबल खेलहरू मिस गर्न सक्नुहुन्न। स्पेनिश डेक वा फ्रेन्च डेक संग, तपाईं चाहानुहुन्छ। तपाईं अनगिन्ती प्रकारका खेलहरू खेल्न सक्षम हुनुहुनेछ, किनकि एउटै डेकसँग त्यहाँ धेरै छन् (Uno, Pócker, Chinchón, Cinquillo, Mus, Solitaire, Blackjack,7and half, Briscola, Burro,…)
स्पेनिश डेक किन्नुहोस् पोकर डेक किन्नुहोस्
निस्सन्देह, यो अन्य श्रेणी छुटाउन सकिँदैन, जुन हालै नयाँ प्रविधिहरूको विकासको लागि धन्यवाद प्रकट भएको छ। र यो हो कि कम्प्युटिङ, इन्टरनेट, र भर्चुअल वास्तविकता, संवर्धित वास्तविकता वा मिश्रित वास्तविकता प्रविधिले बोर्ड गेमहरू खेल्ने तरिका पनि परिवर्तन गरेको छ। ए बोर्ड खेल को नयाँ पुस्ता वयस्कहरूको लागि आइपुगेको छ, र तपाइँलाई यी रोचक परियोजनाहरू थाहा हुनुपर्छ:
अनलाइन बोर्ड गेम र एपहरू
तपाईंको परिवार वा साथीहरूसँग दूरीमा खेल्नका लागि धेरै अनलाइन बोर्ड गेमहरू छन्, साथै केही मोबाइल एपहरू जसले तपाईंलाई मल्टिप्लेयर मोडमा वा मेसिन विरुद्ध क्लासिकहरू खेल्न अनुमति दिन्छ। तपाईं गुगल प्ले र एप स्टोर एप स्टोरहरू खोज्न सक्नुहुन्छ।
केहि वेब पृष्ठहरु संग नि: शुल्क टेबल रस तिनीहरू छन्:
बोर्ड खेल एरेना
संवर्धित वास्तविकता खेलहरू
के तपाईं एउटा बोर्ड गेम कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ जसमा तपाईंले विभिन्न खेलहरूको भीड पुन: सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ, र जहाँ तपाईं तीन आयामहरूमा निर्माण र वस्तुहरू देख्न सक्नुहुन्छ, र जहाँ टाइलहरू टाइलहरू होइनन्, तर जीवनमा आउँछन् र नायकहरू, राक्षसहरू, जनावरहरू, आदि बन्छन्। ।? खैर, कल्पना गर्न बन्द गर्नुहोस्, त्यो पहिले नै यहाँ छ संवर्धित वास्तविकता चश्मा र धन्यवाद यसलाई टिल्ट फाइभ भनिन्छ.
https://torange.biz/childrens-board-game-48360 बाट नि:शुल्क तस्विर (बच्चाको बोर्ड गेम)
अल्गनस डे लास धेरै बारम्बार शंका र वयस्कहरूको लागि बोर्ड गेमहरू वरिपरि सोधिने प्रश्नहरू निम्न हुन्:
वयस्कहरूको लागि बोर्ड खेलहरू के हुन्?
यी बोर्ड गेमहरू हुन् जसमा नाबालिगहरूका लागि उपयुक्त नहुने विषयवस्तुहरू हुन्छन्, यद्यपि सबै होइनन्। र यो हुनु पर्दैन किनभने तिनीहरूसँग वयस्कहरूको लागि उपयुक्त सामग्री छ, तर किनभने तिनीहरू वयस्कहरूको लागि डिजाइन गरिएका छन्, त्यसैले यो सम्भव छ कि घरका सानाहरूलाई कसरी खेल्ने वा बोर हुने थाहा छैन।
यस प्रकारको मनोरञ्जन किन किन्ने?
एकातिर, जब पनि परिवार वा साथीहरूसँग खेल खेलिन्छ, राम्रो समय बिताइन्छ, र हाँसोको ग्यारेन्टी गरिन्छ। साथै, अब महामारीको स्थिति संग यो ह्याङ्ग आउट गर्न को लागी एक महान र सुरक्षित योजना हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, तिनीहरूले तपाईंलाई थप सामाजिक बनाउन र PC स्क्रिन वा गेम कन्सोलबाट टाढा जान पनि मद्दत गर्छन्, जुन सामान्यतया व्यक्तिवादलाई बढावा दिने र अलग गर्ने खेलहरू हुन्। क्लासिक बोर्ड खेलहरूको एकदम विपरीत, जुन नजिक छन्। तपाइँ यसलाई क्रिसमसको लागि वा कुनै अन्य मितिको लागि उत्कृष्ट उपहारको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ।
तिनीहरूलाई किन्न कहाँ?
त्यहाँ बोर्ड गेमहरू किन्नको लागि धेरै विशेष स्टोरहरू छन्, साथै खेलौना पसलहरू जुन वयस्कहरूका लागि यस प्रकारका खेलहरू समावेश गर्दछ। जे होस्, एक उत्तम विकल्प भनेको अमेजन जस्ता प्लेटफर्महरूमा अनलाइन खरीद गर्नु हो, किनकि तपाईंसँग धेरै संख्यामा खेलहरू छन् जुन तपाईंले सबै स्टोरहरूमा फेला पार्नुहुने छैन। थप रूपमा, त्यहाँ मूल्यहरू र कहिलेकाहीं पदोन्नतिहरूको एक विस्तृत विविधता छ जुन तपाईंले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: मलाई फुर्सद दिनुहोस् » सामान्य » वयस्कहरूको लागि उत्तम बोर्ड खेलहरू